မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ကျမ၏လခစားဝန်ထမ်းဘ၀ လစာထုတ်ရက် အတွေ့ အကြုံ
ဟင်း... တူများဒွေက လစာဒွေ ထုတ်ကုန်ကြပြီ..အနော်ဒို့က.. ရတေးဝူး..လကုန်ရက်မှရတာ..ဒါတောင်ညနေ ၆ နာရီကျော်လောက်မှရတာ...ဒီလက စနေလကုန်ဆိုတော့....ရုံးကနေ့ဝက်နေ့ဝက်ဆိုပေမဲ့ လစာကိုတော့ ညနေမှပေးမှာ..စောင်နိုင်ရင်စောင့်.. မစောင့်နိုင်ရင် နောက်နေ့မှယူ...အနော်က.. စောင့်လို့မရ၀ူး..ဟင့်... တနင်္လာနေ့မှ လခထုတ်ရတော့မှာ...ငီး...(ငိုသံ)မမီ....မုန့်ဝယ်ကျွေး............(ဟီး.. ဘာမှတော့မဆိုင်ဝူး..) မုန့်ဝယ်ကျွေး....
ပထမတော့ မိတ်ဆွေကောင်း အကြောင်းပြောတယ်.. ပြီးတော့ လစာမလောက်တဲ့အကြောင်း ပြောတယ်.. ဆက်စပ်စဉ်းစားလိုက်တော့.. အမယ်လေး.. ဝေးဝေးရှောင်မှပဲ..
ဝေးဝေးပြေးလို့ မရအောင် အချစ်ရေ ဖက်ထားချင်တယ်သီချင်းဆိုတာပါ မပန်ရယ် သလဲသီးလေးများလို တကန့်စီ တကန့်စီဖတ်နော်ဒါညိုး ဆက်စပ်စဉ်းစားရဘူး(ပြောရင်လဲ တိုးတိုးပြောလေ .. သူများတွေသိကုန်တော့မှာပဲနော်)
သန့်ဇော်မင်းရေဘာ.ဘာ. ဘာမှဆိုင်ဘူးဒါပေသိ ကျွေးပါတယ် ဘိုင်မပြတ်သေးခင်ထိစေတနာရှိ အဟိ
ဒီလိုပါပဲ မမယ်လိုဒီရေ.. လကုန်ပြီဆို လခရတာနဲ့ဟိုတွက်ဒီတွက်၊ ဟိုပေးဒီပေး၊ ဟိုကုန်ဒီကုန်ဖြစ်ပြီး နောက်မကြာပါဘူး.. နောက်တခါ လခထုတ်ရမယ် ရက်ကို ပြန်မျှော်ရတော့တာပါပဲ..
ဒါဆို ဆိုးဘူး.. ကျန်သေးတယ်ခေါ်တာပေါ့.. ဟီး .. ဘယ်ဘဏ်မှာ သိမ်းရမှန်းမသိရင် ပြောနော်. .ဖင်လန်မှာ မင်းမင်းဘဏ်ဆိုတာရှိတယ်. အရမ်းအာမခံတယ်။ ဘယ်လောက်အာမခံလဲဆို သွင်းပြီးရင် ပြန်မထုတ်ပေးဘူး . ဟီး
ဟိုးခပ်ငယ်ငယ်တုန်းက မေမေတက်တဲ့ကျောင်း (လုပ်သားများကောလိပ်) မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာလေးကို အခု မယ်လိုဒီရဲ့ ပို့စ်နဲ့တွေ့တော့ အဆင်သင့်တာနဲ့ ပြန်ချရေးကြည့်မယ်နော်။ :) လခစားတွေရဲ့ ဘ၀ကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ပြုံးချင်စရာလေးပေါ့…။ ပြတ်တုန်းလပ်တုန်း နှစ်ဆယ့်သုံးဟိုချေးဒီချေး နှစ်ဆယ့်လေးမချေးမငှား နှစ်ဆယ့်ငါးရေသောက်ဗိုက်မှောက် နှစ်ဆယ့်ခြောက်အိတ်မှောက်ဖာသွန် နှစ်ဆယ့်ခွန်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် နှစ်ဆယ့်ရှစ်ရနိုးမျှော်ကိုး နှစ်ဆယ့်ကိုး …တဲ့။ စာအုပ်ထဲက ကဗျာကတော့ အဲဒီလောက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ကျန်တဲ့ နှစ်ရက်အတွက်ကိုပါ ထပ်ဖြည့်ကြည့်ချင်တယ်။ ကျနော်ဖြည့်လိုက်ရင် သိပ်ပျော်စရာ ကောင်းမယ်မထင်ဘူး။ ဖတ်မိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကောင်းမယ်ထင်တာလေး ဖြည့်ကြည့်ကြပါလား။ လခထုတ်ရက်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ :)
စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ ဗျာ။ဖြစ်ရပ် အမှန်ကို ကြိုတင်မသိခဲ့ရင်လည်း .. ဦးကျော်ဟိန်းဆိုခဲ့တဲ့ .. ဟို “ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး” သီချင်းလေးထဲက စာသားလေးလို ... “ဒီကမ္ဘာမြေကို နောက်သို့လှည့်ခိုင်းပြီး .. အရာရာအသစ်က ပြန်စလို့ရရင်” ဆိုတာလေးကိုပဲ .. ထပ်ထပ်ပြီး အော်ကာ ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ် ဗျာ .. ကိုတိုး
dear melody maung,we are from burma today (burmatoday.net, blogger.burmatodaymedia.com) we like your creation. if we haveachance, we will add your blog url in our pages and we want to post your articles in our pages.thanks for your time and we are waiting for your valuable response. you can reach to us postoffice@burmatodaymedia.com or post your comment in our cbox.sincerely,burma today